Prọfesọ John Whitehall. Gmụaka Gender Dysphoria. 12 Video setịpụrụ na Transcript. | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Pịa na Lelee vidio ndị ahụ nke Prọfesọ John Whitehall na-ekwu okwu (naanị na Bekee) ma ọ bụ gbadaa na ibe ya wee pịa na Gụọ ihe ndị ederede nke ihe ọ ga-ekwu n'asụsụ gị site na iji Google Translate n'elu nke ibe a. Enwere ike ibudata pdf nke transcript ọ bụla. Edere ha n'asụsụ Bekee mana anyị enyela njikọ na weebụsaịtị ị nwere ike bulite pdfs a ga-atụgharịrị gị n'asụsụ gị.
Lelee Vidio Gmụaka Gender Dysphoria Ebe a.
Vidio 1 - Nkọwa nke Mmekọahụ Mmekọahụ - (Nkebi nke 1).
Vidio 2 - Nkọwa nke Mmekọahụ Mmekọahụ - (Nkebi nke 2).
Vidio 3 - Medicalzọ Nlekọta Ahụike Iji Nwee Mmekọahụ - (Nkebi nke 1).
Vidio 4 - Medicalzọ Nlekọta Ahụike Iji Nwee Mmekọahụ - (Nkebi nke 2).
Vidio 5 - Mmekorita nke nwoke na nwanyi.
Vidiyo 6 - Hormone Blockers & The Limbic System.
Vidio 7 - Hormone Blockers - Mmetụta Mmekọahụ.
Vidio 8 - Mmekọahụ Mmekọahụ.
Vidio 9 - gerywa Ahụ Maka Mmekọahụ.
Vidio 10 - Schoolslọ Akwụkwọ Maka Mmekọahụ Mmekọahụ - Usoro.
Vidio 11 - Schoolslọ akwụkwọ nchekwa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị - Nsonaazụ.
Vidio 12 - Dysphoria nke nwoke na nwanyị - Ndụmọdụ gbasara mmụọ.
Guo akwukwo nke ndi nwanyi dysphoria vidio Ebe a.
Nweere onwe gị ibudata transcript PDF. Nwere ike iji onye ntụgharị pdf dị n'ịntanetị iji sụgharịa PDF n'ime asụsụ gị.
Enwere ike ịnweta onye ntụgharị ntanetị n'ịntanetị ebe a: -